Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Khipha Sprayer White Futhi Chrome
Ikhaya / Amanzi okugeza / Khipha Oompompi Bokugeza / Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Khipha Sprayer White Futhi Chrome
emhlophe ne-chrome, yesimanje kakhulu, futhi ifana ngokuphelele nemfashini yomhlobiso wendlu yakho. Isivumelwano esishintshashintshayo sepompo esimhlophe esingasetshenziswa singazungezisa ukuhlinzekwa kwamanzi nge-engeli enkulu, futhi uhlobo lokukhipha luyasiza ekuhlanzeni ideski nezinwele. Umpompi uyakhishwa, futhi ayikho i-engela engenamsebenzi yokuwasha ama-degree angama-360, futhi ngeke imanzise izingubo.
1 Gap Simple Setha. Yamukela Umugqa Wamanzi.
Ukubhekana Nakho nge: ukuphathwa okulula kwamanzi abandayo futhi ashisayo. Hhayi ukwamukela i-Plk Plate ne-Pop Up Sink Drain.
I-Metal End Brush Eqinile: imelana nokungcola nokugqwala ekusetshenzisweni kwansuku zonke.
I-Premium Ceramic Disc designer ompompi: ukusakazwa kwamanzi okulula, okungadonsi.
Khipha i-Sprayer unikeze ngamabhodwe / amapani egumbi elengeziwe kanye nemvume ephezulu yosinki.